पूर्व प्रधानन्यायाधिश कार्की सडकमा |
आगोमा जलेर बागलुङको निसीखोलामा १ बालकको ज्यान गयो
नयाँ जमाना जस्तो कालजयी गीत बनाउने विष्णु खत्रीको अर्को यर्थाथपरक गीत विचल्ली
कांग्रेसको राष्ट्रिय जागरण अभियान- कुन जिल्लामा को खटाइए ?
ढोका थुनेर बजेटको तयारी
शुभ बिहानी । मुक्तिनाथ बाबाको दर्शन सहित आजको राशिफल कस्तो छ जानुहोस ।
बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा महासचिव पौडेलले फेरी मुख खोले
काठमाडाैं-अवकाशप्राप्त भइसकेपछि पूर्वप्रधान्यायाधीशको हैसियत एक आमनागरिकसरह पनि हुन्छ। त्यसकारण व्यक्तिगत तवरमा आफ्ना कुरा राख्न पाउने स्वतन्त्रता जो कसैलाई हुन्छ।
पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीको विचारमा व्यक्तिगत हैसियतमा आफ्ना कुरा पूर्वप्रधानन्यायाधीशले राख्न पाउँछन्। ‘कार्कीको उपस्थिति पूर्वप्रधानन्यायाधीश हैसियतमा भएको हो भने आपत्तिजनक छ। तर, व्यक्तिगत हैसियतमा भएको उपस्थितिप्रति टिप्पणी गर्न मिल्दैन’, उनले भने।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्की अवकाशपछि आफ्नो हैसियत आमनागरिकसरह भएकाले बोल्न पाउनुनर्पे तर्क गर्छिन्। उनले भनिन्, ‘समाजमा बढ्दो विकृति-विसंगति, भ्रष्टाचारविरुद्ध बोल्न मलाई कुनै डर छैन। म बोल्छु। अब मलाई कुनै पदमा जानु छैन’
यो खबर हामीले आजको अन्नपूर्णबाट लिएका हौ।
प्रधानन्यायाधीशबाट केही समयअघि मात्रै अवकाश लिनुभएको तपाईंले सडकमै उत्रेर भाषण गर्दा ‘एक्टिभिज्म‘ भयो भनेर टिप्पणी भएको छ, के भन्नुहुन्छ?
के आपत्ति भयो र? यस्तो अभ्यास अन्यत्र पनि छ। भारतमै पनि लोक अदालत भनेर पूर्वन्यायमूर्तिहरू सक्रिय हुन्छन्। मविरुद्ध नै केही अघि संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता हुँदा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठलगायत सडकमै आउनुभएको होइन? अहिले के नौलो भयो र?
डा. गोविन्द केसीका मागप्रति राजनीतिक दलहरूको पनि समर्थन छ। दलहरू संलग्न आन्दोलनमा तपाईंको सहभागितालाई स्वाभाविक रूपमा लिन मिल्छ?
मैले राजनीति गरेको होइन। विकृति-विसंगतिका विरुद्धमा ऐक्यबद्धता जनाएको मात्रै हुँ।
ऐक्यबद्धता जनाउन भाषण नै गर्नुपर्छ र?
अब मलाई कुनै पदमा जानु छैन। राजदूत बनाइदिन्छन्, मानवअधिकार आयोगमा पुर्‍याउँछन् वा अरू पद दिन्छन् भन्ने मलाई कुनै आस पनि छैन। चाहना पनि छैन। अब म सामाजिक रूपमै सक्रिय हुने हो। अवकाशपछि म सामान्य नागरिकको हैसियतमा छु। मैले बोल्न नपाउने? अब मलाई न महाभियोग पनि लगाउन पाउँछन् न त मलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लगाउन सक्छन्। त्यसकारण मलाई बोल्न कुनै डर छैन।
त्यसको अर्थ न्यायालयको गरिमा, मर्यादा जोगाउने तपाईंको दायित्व छैन र?
म सधैं न्यायालयको गरिमा र मर्यादाकै लागि लडेको मान्छे हुँ। तर, अहिले मेरो भूमिका बदलिएको छ। म अवकाशप्राप्त भइसकें। त्यसकारण अहिले मैले चिकित्सा क्षेत्रमा व्याप्त विसंगतिविरुद्ध बोलेको मात्र हुँ। हामी अलि संकीर्ण सोच राख्छौं। तर, अवकाशपछि राजनीति नै गर्दा पनि हुन्छ। किन नहुने? तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी प्रधानमन्त्री हुनुभएको होइन? अहिले मैले केसीको समर्थनमा बोल्दै गर्दा प्रश्न उठाउनेहरूले भन्नुपर्‍यो, त्यसो भए रेग्मी प्रधानमन्त्री बन्न मिल्थ्यो त?
त्यसो भए तपाईं अब राजनीतिक रूपमा सक्रिय बन्नु हुन्छ?
अहिले चिकित्सा क्षेत्रको विसंगतिविरुद्ध बोलेको हुँ। भोलि भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलन भए त्यसमा पनि बोल्छु। पूर्वप्रधानन्यायाधीश भन्दैमा किन नबोल्ने? अब म सामाजिक रूपमा सक्रिय रहन्छु।
अमेरिकामा उजुरी परेको मलाई थाहा नै थिएन – प्रचण्ड
गायक पशुपति शर्माले भने कसैको दवावमा गित हटाएको होइन
अन्ततः सांसद कोमल ओलीले मागीन् माफी ( विज्ञप्ति सहित )
सञ्चाकर्मीसँग झोक्कीए प्रधानमन्त्री ओली – के कुरामा धित नमरेको हो, बुझ्न सकिएन
मलाई सत्ताको मतलब छैन, देशको रक्षाका लागि घर–घरमा छिरेर मार्नेछौंः मोदी
महिनावारीको बेला शारिरिक सम्पर्क गर्दा यस्तो नसोचेको लाभ हुने अध्यनको दाबी
पहिलो भेटमै यौन सम्पर्क भयो, के गर्ने ?
रामवीरले छोडेपनि म चुनाव लड्दिन : बामदेव गौतम
अझै भेटिएनन् पुर्व वडा अध्यक्ष उमानाथ शर्मा
शुभ बिहानी आज शुक्रबार यहाहरुको राशिफल कस्तो छ जानुहोस
वृद्धभत्ता हटाउने तयारीमा ओली सरकार, अब छोराछोरीको कमाइबाट वृद्ध बुवाआमाको खातामा पैसा पठाउनुपर्ने